HomeWararka MaantaRibery Oo Koobka Aduunka Ka Hadhay & Schneiderlin Oo Xulka France Lagu Soo Daray
Xidiga Xulka Faransiiska ee Franck Ribery ayaa laga reebay qarankaas ciyaaryahanada u matali doona koobka aduunka ee todobaad ka dib ka furmi doona wadanka Brazil ee koonfurta qaarada America, kadib markii laga dayriyey soo kabashadiisa dhaawaca dhabarka ah oo ku yaala laacibkan.
Ribery iyo ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Lyon uga ciyaara ee Clement Grenier ayaa labadooduba dhaawacyo daraadeed uga hadhayaan xulka France ee koobka Aduunka ka qayb gallaya.
Laacibkan 80 ka goor u saftay xulkiisa qarankiisa, isla markaana hal bawle iyo lagama maarmaan u ahaa xidigaha uu ku xisaabtamayay tababare Dechamps ee Ribery oo la rajaynayay inuu ka bogsan doono dhaawaca dhabarka uu ka qabo, ayaa aakhirkii maanta la soo saaray natiijadan ka nixinaysa wadanka Faransiiska iyo guud ahaan dadka taageera xulka qaranka France.
Schneiderlin (midig) oo ka soo degaya Clairefontaine kadib markii xulka loogu yeedhay
Xidiga khadka dhexe uga ciyaara naadiga Southampton ee Morgan Schneiderlin iyo laacibka baasha u qabta kooxda Montpellier ee Remy Cabella ayaa looga yeedhay oo lagu soo daray liiska xulka France, si ay u buuxiyaan meelahii ay baneeyeen, Ribery iyo Clement Grenier.
Tababaraha xulka qaranka France, Deschamps, ayaa murugo ku tilmaamay hadhitaanka Franck Ribery ee xulka qaranka uu ka hadhay, waxaanu isagoo arintaas ka hadlaya yidhi. “Tijaabooyin ayaa maanta gallinkii hore la mariyey , kuwaas oo nasiib darro cadeeyey arinka xaalada nagu adkeeyey ee ah in Ribery aan la helli Karin dhawr todobaad.’
‘’Waxaan wada ognahay halkii uu xulka ugu jiray Franck. Xulkayaga oo uu ku jiro Franck Ribery waxaanu ahayn kuwa ugu fiican.
‘Laakiin waxaanu isku dayaynaa inaanu buuxino . waanan sii wadi doonaa dedaalka.’’